Strawberries | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Esi kwadebe strawberries maka oyi: ntụziaka maka ichebe tomato
Ọtụtụ ndị na-ahụ n'anya strawberries na-atụle blọb ha kacha amasị ha n'oge oyi. Na isiokwu anyị ga-agwa gị ihe ị ga-eme ya na strawberries iji chekwaa maka oyi. Strawberries maka oyi: otu esi ahọrọ tomato maka nchekwa N'oge a na shelves nke ụlọ ahịa strawberries flaunts afọ gburugburu. Ị nwere ike ịchọta mkpụrụ osisi strawberries buru ibu ma buru nnukwu ibu ọbụna n'oge oyi.
Ihe kacha mma mkpụrụ osisi strawberry
Ezi strawberry! N'inwe obi ụtọ, onye ọ bụla na-eri ya, ma ụmụaka ma ndị okenye. Ụdị dị ụtọ dị otú a, nke dị ụtọ, mgbe ụfọdụ, na-enwe ọganihu, ma ọ bụghị ụtọ ha dị ụtọ, bara uru - nwere ọtụtụ vitamin na mineral, ígwè, potassium, ọla kọpa, magnesium, manganese. Lemọn dị ala na vitamin C.
Strawberries Kwesịrị ekwesị na nlekọta
Na-akwadebe ala maka akuku strawberries Strawberries na-eto eto n'otu ebe ruo ọtụtụ afọ n'usoro. Nkwadebe nke ala chọrọ nlebara anya pụrụ iche, n'ihi na mkpụrụ nke tomato na-adabere na nkwadebe zuru oke. Mbụ ị chọrọ ịhọrọ saịtị. O kwesịrị ịbụ ebe dị larịị, nke ọma ìhè anyanwụ. N'ezie, n'ihi enweghị ìhè anyanwụ zuru ezu, a ga-enwe oke ihe ubi nke strawberries.
Strawberry dịgasị iche iche "Gigantella"
Ndị ọrụ ubi na-arụ ọrụ kwa afọ na-agbalị imebi osisi ha, nke "na-adị ndụ" na atụmatụ ha. Ya mere, ndị a na-achọ mgbe niile ụdị ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche ga-enwe ike inye ezigbo ihe ubi, na, ọzọ, mkpụrụ osisi mara mma. Maka strawberries, onye kachasị oke nnochite anya nke beri a bụ "Gigantella".
Dịgasị iche iche nke strawberries "Albion"
O siri ike taa ịchọ onye na-agaghị anwa ire strawberries ná ndụ ya. Aha nke abụọ nke nri a bụ garden strawberries. N'agbanyeghị otú o siri sie ike ịmalite nke a ma ọ bụ nke ụdị beri a, ndị mmadụ kwa afọ ma ọ bụ na-ebugharị osisi ndị dị, ma ọ bụ na ha dobe ihe ọhụrụ saplings. Ndị kachasị ewu ewu bụ ụdị ndị ahụ, mkpụrụ nke tomato ruru nnukwu nha ma nwee nnukwu uto.
Strawberry dịgasị iche iche "Queen Elizabeth"
Strawberry bụ otu n'ime ihe ụtọ ndị a hụrụ n'anya ma ụmụaka ma ndị okenye. Ọdịdị nke mkpụrụ osisi uhie ndị a na-anọchi anya oge okpomọkụ, ezumike na ezumike. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ụfọdụ echekwa ngwaahịa a nwere ike zụta n'oge ọ bụla n'afọ, ọtụtụ ndị na-aghọta na nke a abụghị mkpụrụ osisi strawberry, kama ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ọkụ.
Kedu esi akụ mkpụrụ osisi strawberries n'okpuru ihe
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ịkụ mkpụrụ osisi strawberries n'okpuru ihe onwunwe, kọwaa akụkụ dị mma na nke dị njọ nke usoro a, gwa gị otu esi eme ya na ego ole ọ ga-efu. Anyị na-amụta otú e si eme ka arụpụta ihe mgbe ị na-eji ihe eji ekpuchi ihe. Ị ma? Strawberry bụ aha a ma ama maka osisi na strawberries.
Kedu ka "Elizabeth 2", iwu nke ịkụ na-elekọta eze berry
Osisi strawberry nke ọtụtụ ndị hụrụ n'anya. E nwere ọtụtụ osisi dịgasị iche, nke ọ bụla nwere àgwà nke aka ya: uto, ọdịdị, mkpụrụ. Dika ndi na-acho nkpuru akwukwo di iche iche di na Elizabeth 2 di nma, nke a bu kwa otu ya. Ị ma? Ndị na-akọ ubi na ndị na-elekọta ubi na-echekwa Elizabeth dị iche iche dị iche iche n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-ebute tomato ya ma debe ya.
Ihe kachasị iche iche nke akọrọ-obere strawberry na strawberry
Strawberries bụ bred na bara uru, nke ụmụaka na ndị okenye hụrụ n'anya nke ukwuu. Iji nweta uto ya, ọ dịghịzi mkpa ijikọta ọhịa na ịchọta glades zoro ezo, n'ihi na a pụrụ ịmalite mkpụrụ osisi strawberries n'ụlọ. Ụdị strawberry kachasị ewu ewu bụ remontant bezusaya, ụdị kachasị mma nwere ụdị ọdịdị dị iche iche bara uru.
Olee otú esi emeso pests pests
Ọ bụrụ na i chere na ọ bụ naanị ihe dị ndụ ka a ga-echebe, mgbe ahụ ọ bụghị. Anyị niile hụrụ beri a - strawberries, ma ka o wee ruo na tebụl anyị dị mma na ụda, ọ dị mkpa ka ị chebe strawberries site na pests. Na nke a, anyị ga-enyere gị aka ịchọta ya. Esi esi nagide strawite mite Otu n'ime pests ndị kasị dị ize ndụ nke strawberries bụ strawberry mite.
Nlekọta nke strawberries mgbe owuwe ihe ubi
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-achọ ịtọ ụtọ strawberries, buru ibu ma dị ụtọ na oge. Oge eruola iji lekọta owuwe ihe ubi n'ọdịnihu mgbe owuwe ihe ubi gasịrị. Ilekọta beri breeze bụ usoro ogologo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge nile, ma ebe ọ bụ na onye nlekọta ahụ na-elekọta ya, strawberries adịghị enye ya ụgwọ ọrụ.
Otu esi echekwa strawberries n'oge okooko osisi, ndụmọdụ kacha mma
Onye ọ bụla maara na-acha uhie uhie, ụtọ, kemmiri tomato a na-akpọ strawberries. Iji nweta oke owuwe ihe ubi zuru oke, ọ ghaghị inye nlekọta dị elu ọ bụghị naanị n'oge oge na-eto eto na-eto eto, kamakwa n'oge okooko. Nlekọta Strawberry bụ ịgha mmiri kwesịrị ekwesị, nri, nhicha ahihia, oke afụ ọnụ na nsị ala gburugburu bushes.
Ihe niile banyere ịgha mkpụrụ strawberries na mmiri: mgbe, ihe na esi esi mmiri fatịlaịza strawberries n'oge opupu ihe ubi
O nwere ike ịbụ ihe siri ike ịchọta onye na-achọghị ịchọrọ bred na ose dị ụtọ - strawberries. Ha na-arụ ọrụ ebube a n'ọtụtụ mpaghara ihu igwe dị iche iche, na ala dị iche iche, mgbe ha na-etinye usoro usoro agrotechnique dị iche iche. Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole maara ihe kwesịrị ịbụ fatịlaịza maka strawberries, mere na mmiri.
Strawberries bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na mmasị tomato nke gardeners. Ọtụtụ ndị ga-achọ inwe ụdị dịgasị iche iche ha nwere na saịtị ha: nnukwu tomato, nkwụsị dị elu na ọrịa, nlekọta na-adịghị mma na ezi mkpụrụ. Na otu n'ime ụdị ndị a anyị ga-ekwu okwu n'isiokwu a.
Iwu nke akuku na ilekọta strawberries "Russian size"
Onye ọ bụla nke nwere ala nke aka ya na-echekarị na ọ bụ mkpebi ziri ezi ịkọ strawberries. Сочные красные ягоды одинаково любят как дети, так и взрослые, а самым любимым сортом клубники у отечественных растениеводов считается "Русский размер", являющийся крупноягодным гибридом садовой земляники.
Kasị mma ụdị nnukwu strawberries
Strawberries ma ọ bụ mkpụrụ osisi strawberries bụ ndị na-esi ísì ụtọ ma dị ụtọ, onye ọ bụla si na nwata ruo agadi. O siri ike izute onye na-anaghị amasị strawberries na ụdị ọhụrụ ma ọ bụ na desserts, nakwa maka ndị na-eto eto na mpaghara ha, ha chọrọ ka ọ bụrụ mgbe niile buru ibu ma nwee ọganihu. "Gigantella" Oge dịgasị iche iche nke nnukwu strawberries, nke pụtara site na mgbalị nke ndị na-azụlite Dutch.
Ụdị agba "Onyenwe anyị": ihe kwesịrị ekwesị na atụmatụ nlekọta
Ndị na-akọ ubi na-enwekarị obi ụtọ n'ọtụtụ ubi a kụrụ n'ubi. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, ha onwe ha ga-ata ụta maka ịghara inweta ihe a tụrụ anya ya, n'ihi na ha na-elekọta strawberries. Ma ụdị dịgasị iche iche chọrọ ọbịbịa ya na ụfọdụ ọnọdụ ejidere ya. Na strawberry "Onyenwe anyị" abụghị iche na iwu ndị a.
Ihe odide strawberry "Marshal": kụrụ ma lekọta
Strawberry "Marshal" bụ otu n'ime ụdị dị iche iche na mkpụrụ osisi buru ibu. Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ ụdị dị iche iche maka ịzụlite, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịnweta ihe ubi na-adịwanye mfe site na ohia karịa iji obere obere osisi na-egwu obere osisi. Akụkọ banyere nhọta nke ụdị strawberries dị iche iche "Marshal" dịgasị iche "Marshal" - ihe si na ọrụ nke American breeder Marshall Yuell.
Uru na ụzọ kachasị mma nke strawberries freezing maka oyi
Strawberry bụ n'ụzọ ziri ezi otu n'ime mkpụrụ osisi ndị a hụrụ n'anya. O nwere ọtụtụ uru: ihe dị ụtọ, tọrọ ụtọ, na-esi ísì ụtọ, ọgaranya na vitamin, micro na macro elements. Ngwakọta Strawberries na-akwado nkwado (karịsịa bara uru maka ụmụaka na ndị agadi). Obere calorie dị ntakịrị na-eme ka beri mara mma maka nri.
Olee otú na-eri nri strawberries na ụbịa
Strawberries, ma ọ bụ strawberries - bred ma ọ bụ strawberries dị ụtọ - nke ụmụaka na ndị okenye hụrụ n'anya. A na-atụ anya ọbịbịa nke ọkọchị, karịsịa, n'ihi afọ ojuju na-eri nri a. Na mgbakwunye na uto dị mma, mkpụrụ osisi strawberry na-ewetakwa uru dị ukwuu nye ahụ mmadụ - ọ bụ isi iyi nke vitamin, ihe ndị na-emepụta ihe na eriri.
Strawberry "Asia": nkọwa dịgasị iche iche, ịkọ agrotechnology
Ụdị dịgasị iche iche "Asia" enweghị njikọ ọ bụla na ógbè kasị ukwuu n'ụwa. E wepụrụ ya n'Ịtali n'afọ 2005. Ụdị dịgasị iche iche etoola n'ubi anyị, ndị ọrụ ugbo hụkwara ya n'anya. Strawberry "Asia" nwere ọghọm na uru, na n'isiokwu a, ị ga-ahụ nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, yana agrotechnology nke ịkọ ihe na isi ihe nlekọta ya.